Saturday April 25, 2020 - 14:21:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kumanaan ruux ayaa maanta isugusoo baxay qaar kamid ah degmooyinka magaalada Muqdisho waxay ka cabanayeen bandow dilal lagu laray oo lagusoo rogay caasimadda.
Dadka dibad baxyada dhigaya ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah Farmaajo iyo Kheyre oo ay ku eedeeyeen in ay magaalada soo gelisay ciidan dowlado shisheeye ay tababareen kuwaas oo geysanaya dilal iyo dhac.
Dibad baxyada ugu ballaaran waxay ka dhaceen Afar degmo oo kala ah Boondheere,Shibis,Shangaani iyo Xamarweyne, dadka iskusoo baxay waxay ubadanaayeen dumar iyo dhalinyaro kuwaas oo ah kuwa ugu badan ee uu saameynta ku reebay bandowga dowladdu soo rogtay.
Kacdoon wadayaasha ayaa gubay sawirrada Farmaajo iyagoo dhulka dhigay tabeellooyinka lagu dhajiyay sawirrada madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka waxayna ku dhawaaqayeen Farmaajo ha dhaco iyo erayo kale.
Hoos ka daawo muuqaalada dibad baxii maanta